Football Khabar » लेभान्टेले रियल मड्रिडलाई हरायो : बार्सिलोनालाई २ अंकको स्पष्ट अग्रता !
लेभान्टेले रियल मड्रिडलाई हरायो : बार्सिलोनालाई २ अंकको स्पष्ट अग्रता !
स्पेनिस लिग ला लिगाको उपाधि होडमा रहेको रियल मड्रिडलाई ठूलो झट्का लागेको छ । ऊ लिगको २५औं साताको खेलमा पराजित भएको छ । नेपाली समयअनुसार आतबार बिहान भएको खेलमा मड्रिडलाई घरेलु टोली लेभान्टेले १–० ले स्तब्ध बनायो ।
अब यो हारसँगै रियलले लिगको शीर्ष स्थानमा उक्लिने मौका मात्रै गुमाएको छैन, उपाधि होडमा स्प्ष्ट अग्रतासमेत गुमाएको छ । र, यसको सोझो फाइदा बार्सिलोनालाई पुगेको छ । रियल हारेसँगै अब बार्सिलोना २ अंकको अग्रतासहित लिगको शीर्ष स्थानमा छ ।
प्रकाशित मिति ११ फाल्गुन २०७६, आईतवार ०३:३८